St. Kitts & Nevis oo Diiday Galitaanka Dadka Socotada ah ee ka socda Brazil, India, South Africa iyo UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » St. Kitts & Nevis oo Diiday Galitaanka Dadka Socotada ah ee ka socda Brazil, India, South Africa iyo UK
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
St. Kitts & Nevis waxay cusboonaysiisaa la -talinkeeda socdaalka ee booqdayaasha ka socda Brazil, India, Koonfur Afrika iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Dadka ka yimid Brazil, India, South Africa iyo UK waxaa lagula talinayaa inaysan u safrin St. Kitts & Nevis waqtigan.
St. Kitts & Nevis waxay u diidi doonaan inay galaan dadka socotada ah ee ka socda Brazil, India, South Africa iyo UK.
La -talinta safarka ayaa la kordhiyay ilaa Ogosto 31, 2021.
St. Kitts & Nevis waxay sii kordhisay la -talinta safarka dadka socotada ah ee ka imanaya UK, Brazil, India iyo South Africa laga bilaabo Julaay 19, 2021 ilaa Ogosto 31, 2021. Dadka ka yimid meelaha aan kor ku soo sheegnay waxaa lagula talinayaa inaysan u safrin St. Kitts & Nevis waqtigan. Gelitaanka Federaalka waa la diidi doonaa. Muwaadiniinta iyo Dadka deggan St. www.knatravelform.kn.
Kuwa si buuxda loo tallaaley laba toddobaad ama ka badan ka hor imaanshahooda waxaa laga rabaa inay karantiiliyaan afar (4) maalmood markay yimaadaan oo sugaan Baaritaanka RT-PCR ee taban oo la qaatey maalintii afaraad (4), ka hor inta aan laga sii deyn karantiil. Muwaadiniintaas iyo Dadka Deggan oo aan si buuxda loo tallaalin laba toddobaad ka hor imaanshahooda waxaa laga rabaa inay karantiiliyaan 14 maalmood markay yimaadaan.
Go'aanka kordhinta la-talinta wuxuu ku saleysan yahay talada Wasaaradda Caafimaadka waxaana soo saaray Dowladda St. Kitts & Nevis iyada oo loo sii marayo Kooxda Hawlgalka Qaranka ee COVID-19 iyadoo la eegayo ilaalinta xuduudaheeda iyo caafimaadka muwaadiniinteeda. Dawladdu waxay fidinaysaa la-talinta iyada oo laga jawaabayo kala duwanaanshaha COVID-19 ee ka yimid UK, Brazil, South Africa iyo India.
Walaaca gaarka ah ee waqtigan waa kala duwanaanshaha Delta. Xiriirka St. Kitts & Nevis wuxuu sii wadi doonaa inuu la socdo xaaladda soo koraysa wuxuuna bixin doonaa wixii ku soo kordha.
Socotada waa inay si joogto ah u hubiyaan Maamulka Dalxiiska ee St. Kitts iyo Maamulka Dalxiiska Nevis boggaga internetka wixii cusbooneysiin iyo macluumaad ah.